- कान्तिपर संवाददाता
हाँडी बिरयानी खाँदा कस्तो लाग्छ? फेसबुक पेजमा गएर निष्फिक्री कमेन्ट लेखिदिए हुन्छ।
चैत्र १५, २०७३-देशी घिउ, कालीमर्चा, दालचिनी, तेजपत्ता, धनियाँ, अदुवा, जाइफल, पुदिनालगायतका मरमसला राखेर चामलमा बनाइने बिरयानीमा कत्तिको रुचि राख्नुहुन्छ? मुखै रसाउँछ भने नारायणहिटी दरबारको उत्तर ढोकातिर पुग्दा ठीक होला। त्यहाँ नेवारी शैलीमा माटोको हाँडीमा बिरयानी पाक्छ। बिरयानीलाई मेन कोर्समै राखेको आउटलेटको नाम हो, ग्रिन लिभ्स।
श्रीमती र छोरामाथि खुकुरी प्रहार ›